(ဃ)-ဖလမ်းမြို့နယ်၊ သီးဆင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေဠုဝန်စခန်းကို ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခေါ်အဝေါ် ကိုက်ညီသော ဗားလုံ(Valung) ကျေးရွာအဖြစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ တောင်ကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ပါးစပ်ကျေးရွာအား ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက် ကျေးရွာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်မောင်သောင်း ကျား၊မ တန်းတူရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် (CSFoP) ဖိုရမ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်အက်စ်ထုဆန် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်
မြေအောက်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ဉပ ဒေကြမ်းအားလေ့လာခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်းဇော် S.I.T.I Technologies Innovation မှ Mr. Benny Somech (CEO) အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် ရွှေစိန်အာရှကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖွဲ့ အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်စိုးစိုးကြည် မြန်မာနိုင်ငံ ကျား/မ ရေးရာလေ့လာရေးသိပ္ပံအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် သည် Mr. Benny Somech, S.I.T.I Technologies Innovation (CEO) နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(ခ)-ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦအသစ် သီးခြားဆောက်လုပ်နိုင်ရန် မြေနေရာရရှိ ရေးအတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)ပိုင် မြေကွက်အား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ခြင်းရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Feb 24, 2020/
(က)-ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က လိုအပ်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် အခြားအရင်းအမြစ် များ တင်ပြတောင်းခံရန်နှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ပံ့ပိုးပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃.၂.၂၀၂၀) 03/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့(၅.၂.၂၀၂၀) 05/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့(၇.၂.၂၀၂၀) 07/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ (၁၁.၂.၂၀၂၀) 11/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ (၁၄.၂.၂၀၂၀) 14/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၁၈.၂.၂၀၂၀) 18/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၂၀.၂.၂၀၂၀) 20/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ (၂၄.၂.၂၀၂၀) 24/02/20
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၂၀ .၂ .၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၁၈. ၂. ၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့( ၁၄. ၂. ၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ (၁၁.၂ .၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဥ္စမနေ့(၇.၂. ၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ (၅-၂-၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၅ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၃.၂. ၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ (၃၀.၁.၂၀၂၀)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပထမနေ့ (၂၇.၁.၂၀၂၀)